Hanafoana Ny Tobim-piasàn’ny Gadra i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2013 3:35 GMT
Nanambara ny fikasany hanafoana ny rafitra “fanarenana amin'ny alalan'ny asa” i Shina.
Nolaniana tamin'ny taona 1957 ny lalàna izay manome alalana ny polisy handefa ireo ankizy maditra tsy ampy taona hiasa any amin'ny tobim-piasàna mandritra ny efa-taona ny rafitra, tahaka ireo mpangalatra, mpivaro-tena sy mpidoroka rongony ary tsy mandalo fitsarana. Maro ireo nitsikera ny rafitra ho fitaovana ampiasain'ny manampahefana ao an-toerana mba hamelezana ireo mpanakorontana mihantsy ny manampahefana.
Araka ny tatitra tamin'ny taona 2009 nandritra ny forum momba ny zon'olombelona nokarakarain'ny Firenena Mikambana, olona 190 000 no nigadra tao amin'ny tobim-piasàna (an-terivozona) ao Shina ary mbola tsy nandalo fitsarana.
Tamin'ny taona 2012, nahazo sazy an-tranomaizina roa taona tao amin'ny tobim-piasàna ilay manampahefana ao an-tanàna, Ren Jianyu rehefa nandefa bilaogy-madinika manameloka ny lehiben'ny antoko Chongging teo aloha, Bo Xilai ho nitarika ny Revolisiona ara-kolontsaina hiverina ao Shina tamin'ny alalan'ny hetsika “red songs (hira mena)” nokarakarainy. Niteraka hetsika hampitsaharana ny rafitra “fanarenana amin'ny alalan'ny asa” tao amin'ny fampahalalam-baovao sosialy ao Shina ny tranga nahazo an'i Ren.
Noraisina ny fanapahan-kevitra taorian'ny fivoriambe fahatelo, izay nihaonan'ireo Komity Foiben'ny Antoko Komonista Shinoa. Raha maro ireo nihevitra ny hetsika ho dingam-pandrosoana, naneho ny ahiahiny tao amin'ny media sosialy kosa ireo mpisolovava sy mpanao gazety sasany raha tena fanafoanana tokoa izany.
Taorian'ny fihaonam-be fahatelo, nanambara ny drafitra hanafoana ny rafitra “fanarenana amin'ny alalan'ny asa”i Shina. (Saripika avy amin'ny 163.com)
Mpisolovava menavazana, Yuan Yulai nanoratra [zh] hoe:
Hazo misy poizina ny fanagadrana ary mahafaly antsika ny mahita ny fanafoanana izany. Saingy eo foana ny tany, ary azo inoana fa hitombo ivelan'ny (ara-dalàna) ny karazan-toby maro hafa. Tsy tena misy akory izany lazaina fa dingana noraisina izany. Lazaina fa efa eny an-dalana ny dingana, saingy tsy misy lalampanorenena akory eny an-dalana, avy aiza no niavian'izany dingana izany?
Filoha mpitantana ny orinasa Zhongzheng, Peng Xiangfeng nanoratra hoe:
Na dia nofoanana aza ny fanarenana amin'ny alalan'ny asa, aza taitaitra loatra. Taorian'ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ireo mpitarika politika sy ny rafitra mpahay lalàna, toa misy sazy mavaina roa ankehitriny ampiharina amin'ireo tranga maromaro, fanakanana ny iray, ny hampiteraka korontana ny iray hafa, saingy tokony hiatrika fitsarana ambaratonga voalohany sy filan-kevitra aloha izy roa ireo, izay mbola ho azo sokajiana ho fandrosoana.
Nanoratra am-piesoesoana i Li Qidong, mpampianatra avy ao Shenyang izay nalefa tany amin'ny tobim-piasàna nandritra ny herintaona noho izy “nanakorontana tao an-dakilasy” fa:
Raha mbola tsy nofoanana ny fanagadrana, nilaza izy ireo fa “tsy misy mahasolo izany”, raha mbola tsy tafapetraka ny lalàmpanorenana, dia hotsikerain'izy ireo hatrany izany. Indreo ny masontsivam-pirenena Shinoa – misy olona mijoro hatrany eo amin'ny lalan'ny fihavaozana.
“Southern Weekend” naneho hevitra hoe [zh]:
Tsy mbola nisy mihitsy hatrizay rafitra manana fahefana midadasika hanohintohinana ny fahalalahana sivily. Tsy ny fanapahan-kevitra amin'ny fanafoanana ihany no tokony ataon'ny Vaomiera Maharitry ny Komity Foiben'ny Antoko, fa tokony hanamarina ny maha-mifanaraka azy amin'ny lalàmpanorenana sy ny fanavaozan-dalàna momba ny rafi-panagadrana. Tokony hisy ny fanapahan-kevitra mivaingana momba ny fanitsian-dalàna momba ny fanagadrana. Tokony handinika ny fomba hanomezana onitra amin'ny fanagadrana [tsy ara-drariny] noho ny fifandirana ara-pitsarana ny fahefana mpitsara.
Profesora Jiao Hongchang ao amin'ny oniversite shinoa sampana siansa politika sy Lalàna nanoratra [zh] hoe:
Tsy ny fanafoanana na tsia no resaka ankehitriny, fa ny hoe ahoana ny fomba hanafoanana izany, rahoviana, amin'ny fomba ahoana, ary ahoana ny fomba hametrahana rafitra hamenoana ny banga navelan'ny fanafoanana ny rafitra fanarenana amin'ny alalan'ny asa [an-terivozona].